नाच्दानाच्दै कान्छी माननीय ! – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
नाच्दानाच्दै कान्छी माननीय !
मुक्तिको गीत गाउँदै, नाच्दै हिँड्ने सांगीतिक समूह, रक्तिम परिवार । सामन्ती, शोषण विरुद्ध र सर्वहाराको पक्षमा रक्तिमका गीतमा नाँच्दै हिँड्नु उनको दैनिकी । मनमा विद्रोहका ज्वारभाटा, आँखामा क्रान्तिको ज्वाला र शरीरमा उम्लँदो रगत ! राज्य व्यवस्था फेर्ने सपना बोकेर हिँड्ने क्रम जारी थियो, २० वर्षदेखि निरन्तर । उनले ७/८ वर्षको उमेरमै ‘राता’ गीतमा नाच्न थालिन् । जो अहिले माननीय बनेकी छिन् ।
घरको कमजोर आर्थिक स्थिति । गरिब र ‘सर्वहारा’का दुःखलाई पनि उनले नजिकबाट देखिन् । देशको व्यवस्था नफेरिएसम्म गरिबले मुक्ति पाउँदैनन् त्यसैले शोषक सामन्तको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर उनी प्रशिक्षित भइन् । सामन्ती शासन व्यवस्था फालेर जनताको नयाँ व्यवस्था ल्याउन क्रान्तिकारी गीत र कार्यक्रम लिएर गाउँ–गाउँ पुगिन् ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजालाई घुँडा टेकायो । पुरानो राज्य व्यवस्थाबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । तर, पनि उनको पार्टीको आवाज र धारणा फेरिएन । देशमा व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको उनीहरुको धारणा थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि जनतालाई क्रान्तिको आह्वान गर्दै उनले गीतमा अभिनय गर्दै थिइन् ।
आँधीको बेग बनी आउ सारा जनता
तुफानको भेष बनी लौ उठ निमुखा
गरीब झन् गरीब हुँदै गएको र धनी झन् धनी हुँदै गएको उनको विश्लेषण थियो । देशमा संघीयताको बहस सुरु भएपछि युवा समूहबीच उनले भाषण ठोकिन्, संघीयताले देश विखन्डन हुन्छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि उनी रक्तिमका कार्यक्रममा नाँच्दै, गरिब र सर्वहाराको पालो नआएको आवाज निकाल्दै थिइन् ।
‘श्रीमान काठमाडौं हुनुहुन्छ । कहिले बाबु बिरामी पर्छ, भनेको ठाउँमा उपस्थित हुन पाइँदैन । र पनि मैले के बुझेकी छु भने हरेक असहज परिस्थितिले सहजताको नजिक पु‍र्‍याउनेछ
प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकिएको छ । तर, उनको मनमा हुटहुटी र प्रतिपक्षी भावना भने उस्तै छ ।
किसानी परिवारको मुख्य काम । उनका बुबा खेतबारीमा बढी व्यस्त हुन्थे, आमा बढी राजनीतिमा । ‘मेरो आमा पञ्चायतका विरुद्ध गाउँमा लड्नुभएको थियो । ऊ बेला गाउँस्तरमा कहलाएकै नेता हुनुहुन्थ्यो,’ थापाले भनिन्, ‘मसँग राजनीतिक चेतना र एक खालको बिद्रोहको गुण सायद आमाबाट पनि आयो होला ।’
०५४ सालतिर बागलुङ सुखौरा गाउँमै रक्तिमको कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रममा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर र रक्तिमका जनगायक जीवन शर्मा पनि थिए । त्यो कार्यक्रममा उनले नाच देखाउने अवसर पाइन् । जब उनले नाचिन्, केसी र शर्माले स्वाबासी दिए । त्यो उनको लागि अर्को ऊर्जा बन्यो । त्यही स्वाबासीले रक्तिमको यात्रामा होमिने निश्चित बनाइदियो ।
विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि उनलाई गाउँको माहोलले नै कम्युनिस्ट बनायो । रक्तिमका गीतमा नाँच्दै हिँड्दा अझ बढी कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ बुझ्दै गइन् । उनी रक्तिमका गीतमा छमछमी नाँच्दै हिँड्दा माओवादीको सशत्र संघर्ष चर्किँदै थियो ।
पार्टी भूमिगत थिएन तर रक्तिमले खुलेआम कार्यक्रम गर्न स्थिति थिएन । त्यतिबेला गाउँमा प्राय गीत रक्तिमकै बज्थ्यो । जुन हितले क्रान्तिको आह्वान गथ्र्यो । जसका कारण रक्तिमका कलाकार नेपाली सेनाको तारो बनेको उनी सम्झिन्छिन् ।
एकदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने क्रममा बागलुङकै तंग्रामदेखि म्याग्दीसम्म जानुपर्ने थियो । म्याग्दीमा टिकटमा सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो । हिँड्दै गर्दा एउटा खोलामा सेनासँग उनीहरुको झम्काभेट भएछ । त्यतिबेला सेनाले त देख्यो कि थुन्ने अवस्थाको उनी पनि साँक्षी हुन् । उनका कतिपय साथी समातिए पनि । सञ्जोगले उनीहरु समातिएन् ।
टोलीको मुख्य नाइके सेनाको पन्जामा परे । उनीहरु उम्किए । ‘बागलुङमा पढ्दा प्रहरीसँग धरपकड भइरहन्थ्यो । तर, ठूलो फन्दामा परिएन,’ उनी ती दिन सम्झिन्छिन्, ‘नत्र आज माननीय पियारी थापा नहुन पनि सकिन्थ्यो ।’
पियारी जीवन शर्माको अधिकांश गीतमा नाचेकी छन् । रक्तिमका गीत जब भिडियोमा आउन थाले, सुप्रभा थापाको नाममा उनले अभिनय गरिन्, नाचिन् । एकातिर पढाई, अर्कोतिर घरै छोडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, दुखी पीडित जनताको आवाज बोल्नु पनि समाजसेवा हो भन्ने उनलाई लाग्थ्यो ।
झोलामा किताब बोकेरै उनी रक्तिमका कार्यक्रममा हिँडिन् । गाउँमा एउटामात्रै स्कुल थियो । झोलामा किताब बोकेर कार्यक्रममा जाने अनि स्वअध्ययन बढी गर्ने उनले सुनाइन् ।
एलएलसीपछि भने उनी बागलुङ बजार झरेर पढ्न थालिन् । बागलुङबाट आइएसम्मको अध्ययन सकेर उनी रुलर डेभलपमेन्ट पढ्न काठमाडौं हानिइन् । रक्तिम समूह काठमाडौंमा आवद्ध भएर कार्यक्रम पनि गर्ने, पढाईलाई निरन्तरता दिइन् । डिग्री सक्दै गर्दा उनीले एकाएक माननीयको टिकट पाइन् र गण्डकी प्रदेश सभा छिरिन् ।
रक्तिमले नै जुरायो जीवनसाथी
०६० सालतिर गाउँमा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो । उनी नाचको प्रशिक्षण दिँदै थिइन् । गायन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन अर्का एक युवा गाउँ आइपुगे । रक्तिमको त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले उनीहरुबीच परिचयमात्रै गराएन, प्रेमकै बिजारोपण गर्‍यो ।
पहिलो भेटको परिचय नै बिस्तारै प्रेमको परिचय बन्यो । उनीहरुले प्रेमको परीक्षा पास गरे अनि जीवनसाथीकै परिचयमा बदले, त्यो पनि छ वर्षपछि ।
गोरो, सुरिलो स्वर भएको हँसिलो मुहारको ती युवाको नाम थियो, हेमराज आश्रम । ‘उहाँले पहिलेदेखि नै मलाई चिन्नुभएको रहेछ । म जीवन शर्माका थुप्रै गीतमा नाचिसकेकी थिएँ । त्यो हाम्रो परिचय यतिकै सीमित रहेन,’ पियारीले त्यो प्रेमिल दिन सम्झिन्, ‘हामीबीच ६ वर्ष प्रेम बस्यो । अनि सँगै जिउने बाचासहित प्रेमलाई विवाहमा बदल्यौं ।’
विवाहअघि हेमराजको आवाज रहेको गीतमा पियारीले अभिनय पनि गरिन् । दुबै जना रक्तिमबाट सांगीतिक कार्यक्रममा हिँडे । हेमराजले अहिले संगीतमा मास्टर गर्दैछन् । हेमराज अहिले काठमाडौंमा आश्रम म्युजिक प्रालि चलाउँछन् ।
हेमराजले अहिले पनि गीत निकालिरहेका छन् । ४ महिनाअघिमात्र ‘म त हजुर बागलुङकी छोरी, झुठो बोल्न जान्दिनँ’ नामको गीतमा पियारीले पनि अभिनय गरेकी छन् । तर माननीय पियारी अहिले नाच्दिनन्, कोरियोग्राफी गर्छिन् । भन्छिन्, ‘सांसद भएपछि गाह्रो हुँदो रहेछ । अचेल भिडियो कोरियोग्राफी गर्छु ।’
संसदमा बोल्दा लिखित भाषण गर्ने पियारीले यो एक वर्ष थुप्रै पटक जनताका समस्या र अप्ठेरोको आवाज उठाएकी छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विसंगति होस् या विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती उनले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउँदै आएकी छन् ।
सरकारले एउटै पाकोभित्र बजेट राखेर त्यसको बाँडफाँड र बिनियोजन नगरेको भन्दै उनले खबरदारी गरिन् । नेकपाको बहुमत रहेको संसदमा जनमोर्चा सरकारको राम्रो काममा सहयोगी तर प्रतिपक्षको रुपमा निरन्तर खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
संसद सुरु हुँदै गर्दा ५ वर्षीय छोरालाई व्यवस्थापन गरेर बैठकमा सहभागी हुने समय मिलाउनै पियारीलाई सकस पर्‍यो । जिनेजानेको बहिनीको जिम्मा लगाएर उनी संसद पुगिन् ।
‘जनताको प्रतिनिधि भएर संसद पुगेपछि आफ्नो समस्या गौंण हुने रहेछन्,’ पियारी भन्छिन्, ‘धेरै काम गर्न नसकौंला । तर, नराम्रो कदापि गर्ने छैन । आफ्नो समस्या त्यागेर निरन्तर जनताका पक्षमा आवाज उठाउने छु । सरकारको खबरदारी गर्ने छु ।’ अहिले पोखराकै कोठमा भाडामा लिएर बच्चाको हेरचाह र पढाइको व्यवस्थापन गर्न गाउँबाट आमालाई झिकाएको उनी सुनाउँछिन् ।
‘सानो छोरो काखी च्यापेर जनताको काम गर्छु भनेर हिँड्नु आफैंमा चुनौतिको विषय बन्यो । जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमबाट निम्तो आउँछ, कहिले पार्टीको कार्यक्रममा जिल्ला बाहिर जानू पर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान काठमाडौं हुनुहुन्छ । कहिले बाबु बिरामी पर्छ, भनेको ठाउँमा उपस्थित हुन पाइँदैन । र पनि मैले के बुझेकी छु भने हरेक असहज परिस्थितिले सहजताको नजिक पु‍र्‍याउनेछ ।’
संसदमा एक वर्ष गुजार्दा पनि उनी प्रदेश र केन्द्र सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘जुन अपेक्षा लिएर संसद छिरेकी थिएँ । त्यो उत्साह पाइनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारका आफ्नै समस्या नै समस्यामात्र देखिए ।’
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कामै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु संघीयताको मोडल नै ठिक छैन भन्नेतिर नै बल पुगेको उनको विश्लेषण छ ।
‘संघीयताकै कारण म प्रदेश सांसद बने तर खै त एक वर्षसम्म काम गर्न पाएको ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकार आफैं निरिह हुनु भनेको संघीयता नै निरिह हुनु होइन ?’ उनी थप्छिन्, ‘व्यवस्था फेरियो तर खै त हाम्रो सोच, चिन्तन र जीवनशैली फेरिएको ? खै त जनताको जीवनस्तर फेरिएको ?’ –अमृत सुवेदी/अनलाइनखबर